အိုဘယ့် …… လောကဓံ(ဒဏ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အိုဘယ့် …… လောကဓံ(ဒဏ်)
အိုဘယ့် …… လောကဓံ(ဒဏ်)
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on Feb 14, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Think Different | 15 comments
မောင်ရဲ မူးမူးနဲ့ ဆာဗာ၎အောင် ရေးမိသည်
“ဒဏ်ရာတွေ ခင်းထားတဲ့ လမ်းလေးထဲ … ဘယ်လိုများ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ လျှောက်ရအုံးမယ်..
လောကရဲ့ ဆူးပြင်ကျယ်မှာ ….. ” အရက်ဆိုင်ကအပြန် အတော်လေးလဲ ထွေနေပါပီ။ ခေါင်းငိုက်ပီး ခပ်စိုက်စိုက် လျှောက်အလာ လမ်းဘေးနားက တွန်းလှည်းနဲ့ရောင်းတဲ့ ထီဆိုင်လေးဆီက ဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းသံကြောင့် ခြေလှမ်းတော့ ခဏရပ်မိသွားတယ်။ ညာဘက် ပါးစောင်ထဲက လက်ကျန်ကွမ်းဖတ် အစအနတွေကို လက်ညှိုးနဲ့ ပြန်ကလော်ရင်း ကျိတ်ဝါးမိနေလေရဲ့ …. တစ်လက်စတည်း အိတ်ထောင်ထဲက ဒီနေ့ရတဲ့ လက်ကျန် ပိုက်ဆံ ၃၇၀၀ကို ခပ်ဆတ်ဆတ်ဆွဲထုတ်ရင်း ကံကြမ္မာ အလှည့်အပြောင်းအတွက် ငဲ့စောင်းပီး ထီသည်ကို ကြည့်မိတော့ ……..။
အဟတ် .. ကိုယ့်ဆြာက ကျုပ်ကို သောက်ရေးတောင် မစိုက်ဘူး ….. ကျုပ်ကလည်း အတန်းပညာမဲ့ပေသည့်တိုင် လမ်းဘေးက အနုတ်ကျိတ် ထီဆိုင်တွေမှာ သွားထိုးရင် သိန်း၁၅၀၀ မပေါက်မှန်း ကြားဖူးနေတော့ ခုတက်လာတဲ့ အစိုးရနဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာကို မယုံကြည်သလို ဒင်းကိုလည်း ကျုပ်ရဲ့ နှစ်ပဲတစ်ပြား ဉာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်လိုက်ပီး .. သွားကြားထဲက ကွမ်းသီးစကို ပြန်ဆွဝါးရင်း ခပ်သွက်သွက် အိမ်အပြန် ……………….. အင်း … အိုဘယ့် ..လောကဓံ(ဘာမှမဆိုင်)
တာမွေ အခွန်လွတ်ဈေးနား ဖြတ်လျှောက်မိတော့ အကာမဲ့ လေးတိုင်စိုက် ဈေးရုံလေးကို စွေကြည့်မိလိုက်တယ်။ ကျုပ်ဖတ်ခဲ့ဖူးပီး စာလုံးပေါင်းနဲ့ အဓိပ္ပါယ် အသေအချာ မသိတဲ့ တပါတ်ရစ် ဂျာနယ်တွေထဲက အတိုင်း မြန်မာပြည်အနှံ့ ဈေးသစ်ကြီးတွေ ဆောက်နေကြတော့ ဒီဈေးကလေးလဲ ၀ါယာရှော့နဲ့ သုံးထပ်ဈေးကြီး ဖြစ်စေချင်ရဲ့။ သာကေတန်(United State of Thar K Ta)က ကျုပ်ဘကြီး ဦးကြည် အရင်တစ်ခါ ပြန်လာတော့…….. ” မင်းတို့ အိမ်တွေ ဈေးတွေတောင် ဂလောက်ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့ ၀ါယာရှော့ ဖြစ်ပီး မီးလောင်နေကြတာ မင့်တို့ တိုင်းပြည် နူကလီးယားစက်ရုံများ ထောင်ဖြစ်ရင်.. ငါ့နှယ်ကွာတဲ့ ” သြော် ဘကြီးရယ် ဒါလည်း … အိုဘယ့် ..လောကဓံပေါ့(ဘာမျှမဆိုင်)
ကျုပ်က သိမ်ကြီးဈေး စီရုံအောက်မှာ နေ့စားနဲ့ ကားပါကင်ကြေးကောက်တဲ့ အလုပ်လုပ်တော့ အဲ့မှာ ညဘက် အလုပ်လုပ်တဲ့ _ာခေါင်း အောင်ကြီးနဲ့ ဆုံဖြစ်တယ်။ အစတော့ ခပ်တန်းတန်းရယ် နောက်ပိုင်း ဒီကောင်က ကျုပ်ကို ကွမ်းလေး ဘာလေးဝယ်ကျွေးရင်း ခင်သွားတာပေါ့။ တရက်တော့ စကားစမြည် ပြောကြရင်း သင်းကငြီးပြတယ်” ကျနော်လဲ သိပ်တော့ အဆင်မပြေတော့ဘူးဗျ အရင်က လိုင်းကြေး ၆ဖွဲ့လောက်ဘဲ ပေးရတာ ခုကျ ပါတီအင်ဖော်မာ၊ မီဒီယာအင်ဖော်မာ၊ တိုင်းဒေသကြီးအင်ဖော်မာ၊ လွှတ်တော်အမတ်အင်ဖော်မာ .. အိုဗျာ .. ဂျပန်ခေတ်ကလို ကေဒါတွေ များနေတော့ ဘုန်းကြီးဝတ်ပီး နိူင်ငံရေးလုပ်ချင်စိတ်တောင် ပေါက်နေပီတဲ့” သြော် … အောင်ကြီးရယ် .. ဒါလည်း အိုဘယ့် လောကဓံပေါ့ကွာ(ဘာနှင့်မျှ မသက်ဆိုင်)
ကျုပ်ညစောင့်လုပ်တဲ့ သင်္ဘောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အိမ်က …… တစ်ရက်မှာ ကားသမားတွေ စုပီး စကားပြောနေတာကြားရဲ့ “သူဌေးက ခရိုနီကွ .. ခုလောလောဆယ်တော့ အတွင်းမှာ လူတန်းစားတိုက်ပွဲ ဖြစ်နေပီ နိူင်ငံခြားကပြန်လာတဲ့ ပညာတတ်တွေက ပြည်ပရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဆိုတာ အမည်ခံပီး ကော်ပိုထရေစီဆိုတာကြီးကို ချေးငွေတွေ စီမံကိန်းတွေနဲ့ မက်လုံးပြနေတာ ကြာရင် ငါတို့လည်း အလုပ်ပြုတ်ကိန်း မြင်နေပီတဲ့” ကျုပ်တစ်လုံးမှ နားမလည်တာတော့ အမှန်ဘဲ ဒါပေသိ အလုပ်ပြုတ်ကိန်း ဆိုတာကြီးကြောင့် နည်းနည်းတော့ ရင်ထိတ်မိတယ်။ မတတ်နိူင်ဘူးလေဗျာ ပြုတ်လည်း ပြုတ်ပေါ့ ကြုံဆုံရမှာကိုက ကျုပ်အတွက်တော့ အိုဘယ့် လောကဓံလေ(ဘာအကြောင်းနှင့်မျှ မဆိုင်)
တပတ်လောက်တော့ ကြာပီ ကျုပ်ရင်ထဲ ဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်း မသိဘူး ….။ ကျုပ်တဲဘေးက ကလေးတယောက်တော့ ပညာတတ်လေးရယ် သူလည်း အလုပ်အကိုင်မကောင်းတော့ နိူင်ငံရေးပါတီတစ်ခုမှာ လူငယ်ဘာဆိုလားဘဲ အဲ..ဒါပေမဲ့ သူရှေ့မှာ ထောင်ထွက် စီနီယာဆိုလားတွေ များနေတော့ တက်လမ်းနှေးနေတယ်လို့ ပြောပြရဲ့ ကျုပ်လဲ ဃဂဏန မသိဘူးရယ်။ ကျုပ်က ကျုပ်ခံစားရတာလေး ရင်ဖွင့်ကြည့် မိတာပါ ” မောင်ခိုင်ရာ ငါ့ဘ၀ ဇာတာမကောင်းပုံများ မွေးခတည်းက ခုသေခါနီးအထိ စိတ်မောလူမောနဲ့ကွာလို့ မသေခင်တော့ အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြစ်ချင်ရဲ့ကွာလို့ ဆိုတော့”….”ဦးမိုက်ရာ ကျနော်တို့ အန်တီနဲ့ ဘကြီးလဲ သိပ်မထူးပါဘူး … ကျားကြီးရင် ခြေရာကြီး ဆိုသလို ခင်ဗျားထက်တောင် ပိုဆိုးသေးပါတယ်ဗျာတဲ့” သူ့အန်တီ(အဒေါ်)နဲ့ အဘကို ဘယ်သူဘာမှန်း မသိပေမဲ့ ကျုပ်ကတော့ တွေးနေကျအတိုင်း ခပ်လေးလေး ပြောမိလေရဲ့
အိုဘယ့် …. လောကဓံပေါ့ မောင်ရာလို့ ……..
ရယ်ပြန်တော့လည်း လောကဒန် ငိုပြန်တော့လည်းလောကဒန်
နေရာဒကာ ခင်ဗျားဂျီးပဲ။ လောကဒန်ရယ်..။
ရဲစည်ရဲ့ ထေ့တေ့တေ့ ချိတ်တိတ်တိတ်လေးတွေ မဖတ်ရတာ ကြာနေပြီ။
ဒီလိုလုပ်လေ.. “ဓံ”ကို.. “ဒန်”ပြောင်းပြီး.. ပဲကြီးလှော်နဲ့လဲစားလိုက်..
( ဘာလေးရယ်နဲ့မှ.. မဆိုင်.. ငသတ်..မဆိုင်.. )
အဲ..ဒါပေမဲ့ သူရှေ့မှာ ထောင်ထွက် စီနီယာဆိုလားတွေ များနေတော့ တက်လမ်းနှေးနေတယ်လို့ ပြောပြရဲ့
အဲဒါလေးတော့.. ထိသွားတယ်.. “တိန်.. “
လောက ဘူ..သို့ ပေါ့…။
အဲ့ နာမည်ပါသွားတာကိုက …
အိုဘဲ့ လောကဘူ ( ခရဒစ်တူ သဂျီး ) …. အဲ လောကဓံပေါ့ အူးမိုက်ရယ် ..
အရင်ကတော့ ၅ည သမားဆိုရင် ရဲရဲတောင်မခေါ်ဝံ့…
အခု နှစ်ကြီးလေ… ၀ါကြီးလေဆိုတော့… ဒါလဲ လောကဓံ
စာရေးဆရာ တန်းဖြစ်တဲ့ နည်းဗျ၊ ဒါလည်း လောကဒန်ပဲ ဗျို့
ရယ်စရာ တွေးစရာလေးတွေနဲ့ ရေးသွားသော ကိုရဲစည်ကို အားပေးသွားပါဧ။် ။ ပါတီမှာ စီနီယာဖြစ်အောင် ထောင်ကျဘူးရမှာလားလို့ အဟွန့် လို အော်ငိုရမလို အော်ရယ်ရမလို ဖြစ်နေပါဧ။်။ သြော်..ဒါလည်း လောကဓံတစ်ပါးပဲ။
ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ အခုလို နိုင်ငံအပြင်ရောက်နေရတာလည်း လောကဓံ…
ဘဘကြီးတွေ စားချင်စားချင် ဆွေခုနှစ်ဆက် မျိုးခုနှစ်ဆက်စာ စားနေရတာလည်း လောကဓံ…
ကုန်ကုန်ပြောရရင် ခင်ဗျား လူပြိုဂျီးဖြစ်နေရတာလည်း လောကဓံပေါ့ဗျာ…
ဟေ့ … အူး၎ဂျီး
လောကဓံ အကြောင်းကို အူး၎က အနော့်ထက် ပိုသိမှာပါ
မဆီမဆိုင် လက်ပံသားကို ဓါးနဲ့မချိုင်ပါနဲ့ .. လို့ ငွင်းငွင်း ..တွေ့မယ်
ဗဟုသုတ အများကြီး ရလိုက်တာပါကလား ဆြာစီ ရဲ့ 
ထပ်တိုး အေးဓါးပြအဖွဲ့ တွေက
“ပါတီအင်ဖော်မာ၊ မီဒီယာအင်ဖော်မာ၊ တိုင်းဒေသကြီးအင်ဖော်မာ၊ လွှတ်တော်အမတ်အင်ဖော်မာ”
လောကဓံ လံကဓော မောဟိုက်လို့တော်
နင်လောက်ကတော့ ငါက စပျော့
အဲဒီ လောကဓံကို လန်ကဓောဖြစ်အောင် ပြောင်းပြန်လှန်ပလိုက်မယ်
တက်ပြန် သက်ပြန် လောကဓံလို့ ပြောကြတယ်။
ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် နိမ့်တဲ့အခါကျမှ လောကဓံလို့ ညည်းတွားကြလေ့ရှိပါတယ်။
လောကဓံနဲ့တွေ့ရင် လူတွေရဲ့ ပြောင်းလဲတတ်ပုံကို ကြက်ဥ၊ မုန်လာဥ၊ နဲ့ လက်ဖက်ခြောက်တိုိ့နဲ့ ဥပမာပေးပြီး Cobra ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်လေး သဘောကျမိတယ်။
ကြာတော့ကြာပြီ ဖတ်ချင်တဲ့သူ ဖတ်နိုင်အောင် လင့်ခ်ပြန်ရှာပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟက်လူဂျီး ကရဲစည် …
ခညားကို ရွာ့လူကြီးတွေက ဆင့်ခေါ် ခိုင်းလိုက်လို့ ကျုပ်လာရဒါဘဲ ….
ခညား လိုက်ရင် လိုက်၊ မလိုက်လို့ကတော့ ပိုက်ပြီး ပြေးမှာ … (ဘာဒုန်းဒေါ့ သိဝူးး)
ကျုပ် လိုက်ဖိတ် နေဒါဘဲ ….
နောက်တော့ အတော် နောက်ကျနေဘီ …
ဒါမယ့် .. မသိဂျင်ယောင်ဆောင်ဘီး လာဂဲ့အုံးဂျာ …
မသွားခင် ကျုပ်ကို တစ်ခွက်လောက် တိုက်အုံး ….